स्थानीय सरकार र नागरिक सम्बन्ध : RajdhaniDaily.com - स्थानीय सरकार र नागरिक सम्बन्ध
Home बिचार स्थानीय सरकार र नागरिक सम्बन्ध
विगत २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भई कार्यकाल २०५९ सालमा सकिएपछि अहिले १५ वर्षमा चुनाव हुँदै गर्दा पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको चुनाव हुनेक्रममा छ । पहिलो चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारीले केही समयपछि नै आफ्नो पदभार ग्रहण गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दै छन् । यस अवस्थामा स्थानीय सरकार र नागरिकको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ला ? यसै विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।
हाम्रो समाजमा राजनीतिको अगुवाइ गर्ने व्यक्तिलाई नेता र उसको कार्यशैलीलाई नेतृत्वको अर्थमा बुझेका हुन्छन् । राजनीतिको विषय क्षेत्र नीति हो । त्यसकारण नीति निर्माणमा नेतृत्वको सफलता देखिन्छ । नीति निर्माण भनेको विचारको परिचालन र परस्पर प्रतिस्पर्धी प्राथमिकता निर्धारण हो, जुन समूहको निर्दिष्ट गन्तव्य हुन्छ र त्यहाँसम्म पुग्ने स्पष्ट मार्ग प्रशस्त पनि गरिएको हुन्छ । आशाको खेती गर्नु नेताको व्यवहार हो । उसले साझा मान्यता र दृष्टिकोण निर्माण गर्दछ ।
नेतृत्व भनेको व्यक्ति र ओहोदा होइन, यो त मानिसबीचको जटिल नैतिक सम्बन्ध हो, जुन विश्वास, दायित्व, प्रतिबद्धता, भावना र साझा दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ । कुनै पनि सरकारले त्यतिखेर मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ, जब यसका क्रियाकलाप समन्वयात्मक ढंगबाट सम्पादन गरिन्छन् । तर, हाम्रो राजनीतिक दलले सोही समन्वयात्मक ढंगले सरकार चलाउन नसक्दा राजनीतिक स्थिरता नभई संक्रमणकाल लम्बिन गई स्थानीय चुनाव हुन नसकी लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहन बाध्य बनाइयो । जसका कारण विकास निर्माण र सुशासन असहज बनिरहेको थियो । यसैलाई सहजता प्रदान गर्न दलीय सहमति जुटाउन उद्देश्यले सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिएको भए पनि यसले झनै अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्ट भइदिँदा जनतालाई राजनीतिमा वितृष्णा पैदा गराइदिएको छ ।
सबै दल उस्तै हुन् भन्ने सोलोडोलो प्रतिक्रिया नागरिकबाट अभिव्यक्त हुन थाल्यो । यस अवस्थामा भएका राम्रा कार्य पनि ओझेलमा पर्न पुगे र राजनीतिक दलहरू आलोचनाको पात्र बन्न पुगे । सोही कारण अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिउपर पनि सोही आशंकाको आँखाले हेरिरहेको वर्तमान अवस्थाको कारण चुनावमा निकालिएका घोषणापत्र र स्थानीय प्रतिबद्धतापत्रको कार्यन्वयनप्रति पनि प्रश्न उठाइरहेको वर्तमान अवस्था हो । त्यसैले, अहिले सरकार र नागरिकबीच नयाँ आशा र विश्वास जगाउने खालका कार्य गरी त्यो शंका चिर्नु र सुधारको दिशाबोध गराउन सक्नु स्थानीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएको छ ।
सरकारको औचित्य सिद्ध गर्नु र प्रभावकारी सेवा वितरण गर्नु पनि दोस्रो जिम्मेवारी भएको छ । यसका लागि ठूलो कसरत र प्रयास चाहिँदैन । स्थानीय सरकारको ससाना व्यवहारबाट नै यसको सुरुवात गर्न सकिन्छ । यसका लागि सामान्यतया दस सूत्रीय आधार हुन सक्तछन् ः सेवाग्राहीका हरेक कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लेऊ । सेवाग्राहीले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका यातना र पीडामुक्तिसम्बन्धी माग, सिकायत र सरोकारका विषय सेवाप्रदायकसमक्ष राख्दा सेवाप्रदायकले सो विषय गम्भीरतापूर्वक लिई सोअनुरूप तत्काल सुधार ल्याई व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छन् । कतिपय मागहरू असम्भव पनि होलान तर पनि त्यसप्रति सकारात्मक गम्भीरताका साथ लिनाले मात्र पनि नागरिक विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ ।
सरकार र नागरिक सम्बन्धसूत्रको काम गर्ने पदाधिकारी व्यक्ति जोसुकै होस्, उसको कर्तव्य नागरिक पक्षीय दृष्टिकोण राख्नुमा रहन्छ
सेवाग्राहीको माग सिकायत निवेदन र आग्रहलाई हलुका रूपमा लिने बानीले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच असल सम्बन्ध विकास गर्न बाधा पार्छ । दोस्रो कुरवा भनेको नागरिक दृष्टिकोणबाट सुरु गर्ने हो । हरेक सरकारको केन्द्रबिन्दुमा नागरिक रहनुपर्दछ । सरकार र नागरिक सम्वन्धसूत्रको काम गर्ने पदाधिकारी व्यक्ति जोसुकै होस्, उसको कर्तव्य नागरिक पक्षीय दृष्टिकोण राख्नुमा रहन्छ । उसले ‘म त्यही विषय लिएर नागरिकका रूपमा सेवा लिन आएको भन्ने सोचाइ राख्न सक्नुपर्दछ । यस सोचाइले विषयप्रतिको गहनता बुझ्न सघाउँछ र सेवाग्राहीले सेवाको अनुभूत गर्न सक्दछ ।
तेस्रो कुरामा के वाचा गरिएको छ त्यो पूरा गर । सरकारको हरेक निकाय निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापित गरिएका कारण ती नीति कार्यक्रमको कार्यन्वयन र सेवा प्रवाहजस्ता कार्य गर्नु यस्ता निकायको कर्तव्य हो । यस्ता विषय वस्तु नागरिकबीचको छलफलबाट तय गरिने भएकोले त्यो पूरा गरिनु जनताप्रतिको इमानदारिता हो । नागरिकको बीचमा एक थोकको वाचा गरेर पछि अर्कै थोक गर्दा नागरिक र सरकारबीच दरार उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण यस्तो नहोस् भनेर बेलाबेलामा सेवा प्रवाहलाई सार्वजनिक गर्ने, सामाजिक परीक्षण गर्ने, नागरिक सुनुवाइ गर्नेजस्ता प्रतिक्रियात्मक उपाय पनि अपनाएको पाइन्छ ।
तर, यसरी कार्य भइसकेपछिको उपाय अपनाउनुभन्दा पहिले नै जागरुक भई यस विषयमा सोची काम गर्नु राम्रो हुनेछ । चौथो समयलाई ध्यान देऊ । समय सबैभन्दा महŒवपूर्ण साधन हो । जसलाई न सञ्चय गर्न सकिन्छ, न पुनः प्रयोगमा ल्याउन नै सकिन्छ । हाम्रा सरकारी निकायमा प्रायःजसो समय साधनलाई त्यति महŒव दिएको पाइँदैन । समयले कसैलाई पर्खंदैन । समयलाई ध्यान नदिनेहरूले कामको लागत बढाउँछन् र कामलाई निरर्थक बनाउँछन् । हिजोको युद्ध आज लडेर के गर्ने ? मृत्यु हुनुअघिको उपचार गरिनुपर्दछ ।
त्यसैले सम्पादन गरिनुपर्ने कार्यहरू उपयुक्त समयमा नै पूरा गरिदिनुपर्दछ । पाचौं कुरा, सिर्जनशील बन्न सक्नुपर्छ । परम्परादेखि अवलम्बन गरिँदै आइएको हाम्रा कार्यसम्पादनका शैली र विधि थोत्रा भएका हुन सक्छन् । यसले नागरिकको मन छुन नसकेको हुन सक्छ । त्यसैले यसमा निरन्तर सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रा कार्यव्यवहारलाई व्यवस्थित गर्न कानुन र कार्यविधि निर्माण गरिएको भए तापनि अत्यधिक कार्यविधिले खेललाई भन्दा खेलको नियमलाई ध्यान दिएको पनि हुन सक्तछ । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा सिर्जनशील सोच र व्यवहारको साथ नागरिक पक्षीय भई सेवा प्रवाह गर्न चुक्नुहँुदैन ।
त्यसैका लागि सुशासन ऐन २०६४ र नियमावलीले प्रत्येक निकायमा शासकीय सुधार इकाइ गठन गनर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । केद्रीय स्तरमा धेरैजसो निकायमा यसको गठन भइसकेको पनि छ । यो वास्तवमा परिवर्तन इकाइ पनि हो । यसले परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिलाउन ठूलो भूमिका खेल्छ । छैटौंमा विविध चासोबीच सन्तुलन कायम गर । स्थानीय स्तरमा विविध स्वार्थको बीच टकराव आउने गर्दछ । यो चाख र स्वार्थहरू बीचको प्रतिस्पर्धा पनि हो । यस अवस्थामा सरकारको धर्म नै बढीभन्दा बढी नागरिकको चाख निर्माण हुनेगरी प्रतिस्पर्धी चाखको सन्तुलनबाट साझा चाख वा चाहना स्थापित गर्नु हो ।
यसरी चासोहरूको निर्माण नगरिएमा सार्वजनिक निकायको काममा ठालुको प्रभाव स्थापित भएको देखिँदा सरकार आलोचनाको सिकार हुनुपुग्छ । विश्वमा ठालुको प्रभावमा परेको आरोप सरकारलाई लाग्ने गरेको छ । त्यसैले, सार्वजनिक निकाय वा सरकारले सधंै निःस्वार्थ वस्तुपरक पारदर्शी र सदाचारी व्यवहारमा देखिनका लागि धरै चाखको बीचबाट एउटा साझा चाख आउनेगरी सन्तुलन कायम गर्नसक्नुपर्दछ । सातांै, आलोचनाप्रति उदार वन – सरकार र यसको संयन्त्र नागरिक इच्छा निर्माण र क्रियान्वयन गर्ने संयन्त्र भएकोले आलोचना र सिकायतप्रति सधंै उदार बन्नुपर्दछ । आलोचना र शिकायत सुधार र परिवर्तनको पनि आधार हो ।यसले सांठानिक सिकाइ र नीति पृष्ठपोषणको पनि आधार दिने गर्दछ । आलोचना गर्नै सिकायत गर्ने सुझाव दिने र यसबाट पनि अपेक्षित काम नभएमा दबाब दिने सेवाग्राहीको अधिकारकै कुरा हो तर त्यो चाहिँ सही हुनुपर्दछ ।
यस्ता सिकायतलाई तत्काल सम्बोधन गरेर नै नागरिकको मन जित्न सरकार सफल हुन सक्दछ । आठौं, आफना सहयोगीप्रति विश्वास गर – सरकार भनेको समूहमा काम गरिने कार्यस्थल हो । जहाँ प्रत्यकले आफूलाई सुम्पिएको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्दछन् । त्यसैले, यस्ता निकायले आफना समूहका सबै सदस्यलाई विश्वासमा लिन सहभागितात्मक कार्यप्रणाली अबलम्वन गर्ने, प्रोत्साहन र अवसर वितरणमा न्यायपूर्ण व्यवहार अपनाउने गर्नुपर्दछ । अन्यथा उसबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा उसले स्वामित्व लिँदैन र त्योे कार्यप्रणाली औपचारिक मात्र हुन पुग्दछ । हामिले हरबखत आन्तरिक विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहनुपर्दछ ।
नेतृत्व भनेको व्यक्ति र ओहदा होइन, यो त मानिसबीचको जटिल नैतिक सम्बन्ध हो, जुन विश्वास, दायित्व, प्रतिबद्धता, भावना र साझा दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ
यस्ता सरकार नै सफल मानिन्छन्, जो खुला र विनम्र रूपमा आफनो समूहसँग व्यवहार गर्दछ । नवौं, आफूले बनाउने नीति र कार्यविधि समन्वित हुने गरी बनाउ – आन्तरिक कार्यनीति र कार्यविधिहरू एकअर्कासँग मेल नखाने भएमा सेवाग्राहीको अपेक्षाअनुरूपको सेवा प्रवाह हुन सक्तैन । त्यसकारण आफना नीति कार्यविधि निर्माणअघि यसका अग्रपृष्ठ सम्बन्धको विश्लेषण गरेर मात्र गर्ने गर्नुपर्दछ । अन्यथा एउटा नीतिले भनेको कुरा अर्काे नीतिले काट्ने पनि हुन सक्तछ । त्यसअघिका र अहिले निर्माण गरिने नीतिको राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मात्र वा समन्वित हुनेगरी मात्र नीति कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्दछ ।
दसांै, अहिले नै गर– हाम्रो समाजमा सरकार पक्षलाई लाग्ने गरेको आरोप के पनि हो भने ऊ काम गर्न अल्छि मान्छ, समयलाई वास्ता गर्दैन, गर्छु भन्छ तर गर्दैन वा गरेको जस्तो मात्र गर्छ, आफूले गर्नुपर्ने कामलाई तलतिर झार्छ वा गर्नुपर्ने कामलाई विभिन्न अड्को थापेर झुलाएर राख्छ आदिइत्यादि । यी विकृति विसंगति नहटाई सेवाग्राहीको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । त्यसैले, सेवाग्राहीले आफूले गराउनुपर्ने कामका लागि कुनै नेता, कार्यकर्ता र बिचौलियाको साथ नलिइकनै मर्यादित र सरल तरिकाले काम लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हो । यसले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गराउँछ । त्यसकारण गर्नुपर्ने कामका लागि समर्पित भएर सरकारले लाग्नुपर्दछ ।
वास्तवमा अहिलेका जनता सरकारबाट भनेको होइन, गरेको देख्न चाहन्छन् । जनताले व्यवस्था मात्र परिवर्तन खोजेका होइनन् आफ्नै अवस्थामा परिवर्तन खोजेका हुन् । कार्यलयमा बडा पत्र झुन्डायर मात्र सुुशासन नहुने रहेछ भन्ने सिद्ध भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा भाष्कर चटर्जी भन्नुहुन्छ कि उपयुक्त मानिस उपयूक्त स्थानमा र उपयुक्त समयमा उपलव्ध हुने सुनिश्चितताको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन जरुरी छ ।
अन्त्यमा, यसरी तत्कालका लागि माथि उल्लिखित आधारमा सरकारको सेवा प्रवाह भयो भने पनि स्थानीय सरकार र नागरिकको बीच असल सम्बन्ध विकसित भई विश्वास र अपनत्व वृद्धि हुन्छ र जनताले तत्कालै परिवर्तनको अनुभूत गर्न सक्षम हुनेछन् ।
Breaking News मधुजंग पाण्डे - February 25, 2021 0
काठमाडौं । भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी (सुवर्ण पीठिका) राखिएको छ । बुधबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा १०८ केजी सुनको जलहरी राखिएको...
अस्पताल नै जोखिमको केन्द्र
डा. प्रकाश बुढाथोकी - August 30, 2020 0
सर्वाेच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महान्यायधिवक्ता कार्यालयलगायतका निकायका नाममा पीसीआर नगरेको कारण देखाएर तथा कुनै बहानामा स्वास्थ्य उपचार इन्कार नगर्न...
काभ्रेपलाञ्चोक । लजिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले बुहारी रञ्जनाको हत्या गर्ने नमोबुद्ध नगरपालिका–८ डराउनेपोखरीका सुदर्शन अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम...
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - July 29, 2020 0
काठमाडाैं । लकडाउन खुलेसँगै कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दर बढेको पाइएको छ । लकडाउन खोल्नुअघिको आठ दिन र लकडाउन खुलेपछिको आठ दिनपछि परीक्षण र सङ्क्रमितको सङ्ख्या...
कला राजधानी समाचारदाता - February 8, 2021 0
बिचार विनन्द वैद्य - August 27, 2020 0
घरभित्रै दशैँ मनाउन चितवन प्रशासनको अनुरोध
प्रदेश ३ रासस - October 14, 2020 0
चितवन । कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लावासीलाई यस वर्ष घरभित्रै बसेर दशैँ, तिहारलगायत चाडपर्व मनाउन आग्रह गरेको छ । प्रशासनले अनावश्यक...
उदयपुरमा एकै दिन थपिए ८ जना संक्रमित
प्रदेश १ ईश्वर तामाङ - June 28, 2020 0
उदयपुर । उदयपुरमा ४ महिलासहित ८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । तेश्रो मुलुलक तथा भारतको बिभिन्न स्थानबाट आएर त्रियुगा नगरपालिका– ३ स्थित त्रियुगा...